६० बर्षे नायक भुवन केसीको अनौठो प्रेम कहानी (भिडियोसहित) – Complete Nepali News Portal
६० बर्षे नायक भुवन केसीको अनौठो प्रेम कहानी (भिडियोसहित)
ScotNepal March 26, 2021
नेपाली चर्चित नायका भुवन केसि हुन् । उनकाे उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगरेता पनि भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम देखिन्छन् ।
बिश्वस्त सूत्रहरुका अनुसार भूवन केसी र जीया केसी लामो समयदेखि भेट्गाट गरेका छन् । भुवनको घरमा जीया केसीलाई धेरै पटक देखेको केही चलचित्रकर्मी बताउँछन् । भुवनसँग निकट भएपछि जीया अहिले चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छैनन् । तर, एक्ला भूवन केसीलाई जीयाले उनकै घरमा बसेर साथ दिइरहेकी छिन् ।
उनीहरु बिच भेटवार्ताकाे कुरालाई दुबैले अस्विकार गर्दै आएका छन् । तर, भुवन केसीको घरमा काम विशेषले पुग्ने चलचित्रकर्मीले जीयालाई पनि कैयौंपटक भेटेको बताउँछन् ।
दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हो यही माया हो’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेकेकि नायिका हुन् जिया केसी । झापाबाट अभिनेत्री बन्न काठमाडौं आएकी जियाले उक्त चलचित्रपछि एटिएम, ब’र्बाद, वाचा, रिङरोड, रङ वे आदि चलचित्रमा अभिनय गरिन् र उक्त चलचित्रहरु केहिले राम्रै सफलता पाएका थिए । पछिल्लो समय भने उनी चलचित्र अभिनयबाट लगभग अलगजस्तै छिन् ।
नायक भुवन र जीयाको यो ‘लुकिछिपी’ प्रेमले कहिले औपचारिकता पाउला त ? यस बिषयमा भुवनले भने अहिलेसम्म केहि खुलसा गरेका छैनन् ।
ऐतिहासिक तामाङ्ग ईतिहासमा आधारित फिल्मको सुभ मुहुर्त सम्पन्न, १७ गतेबाट...
देशभर गुड फ्रेण्ड चैत्र २० देखि
सम्मान स्वरुप १/१ सेयर गरौ !! ईन्द्रेणीका बाँसुरी बाधक पावलले...
बालाजु माछापोखरी बुद्धमलमा रश्मिलाज् फेसियल हाउसको शाखाको भब्य उदघाटन तथा...
नेहा र विनिभ बन्न सफल भए मिष्टर एण्ड मिस प्लस...